Kulan Wadatashiya Oo Ka Dhacay Degmada Galaadi - Cakaara News
Kulan Wadatashiya Oo Ka Dhacay Degmada Galaadi
Galaadi,(cakaaranews), Sabti, 3da September, 2016. Waxaa ka dhacay degmada galaadi ee Gobolka Doolo kulan balaadhan oo lagaga tashanayey dar dargalinta fulinta qorshayaasha horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta Gobolka Doolo, maamulka degmada Galaadi iyo qaybgala kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galaadi iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada galaadi sida odayaasha, dhalinyarada iyo haweenka.
Kukankaa ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Maxamuud Cali Axmed oo sheegay in ay ujeedada kalankani tahay sidii loo sii xooji lahaa dar-dargalinta hawlaha horumarka nabadgalyada maamulka suuban iyo guud ahaanba fulinta barnaamijyada arimaha XDSHSI.gudoomiyaha ayaa sharax dheer ka bixiyay kaalinta ay qaybaha kala duwan ee bulshadu ,ku leeyihiin hirgalinta qorshayaasha horumarka nabadgalayda iyo maamulka suuban.
Waxaa kale oo ka hadlay kulankaasi madaxa arimaha XDSHSI Gobollka Doollo mudane Jaabur Shugri wuxuuna ka warbixiyay istaraatajiyadaha iyo qorshayaasha u dajisan XDSHSI ee ka salaysan tir tirida saboolnimada iyo hirgalinta koboca dhaqaalaha iyo tabaha fulineed ee lagu hirgalinayo qorshayaasi. Masuulka ayaa tilmaan ka bixiyay qaybaha kala duwan ee bulshada doorka ay ku leeyihiin hirgalinta hawlahaasi.
Dhankiisa ku simaha gudoomiyaha degmada Galaadi mudane Muxiyadiin Maxamuud Sullub oo ka hadlay kulankaasi ayaa ka warbixiyay horumarka balaadhan ee ka hirgalay degmada Galaadi iyo doorka ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshadu hirgalintiisa. Wuxuna sheegay in loo baahan yahay sii xoojinta iyo dar-dargalinta fulinta qorshayasha dajisan
Qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka hadlay kulankaasi ayaa soo dhaweeyay kulankan lagu dar-dargalinayo horumarka iyo arimaha xisbiga waxayna hoosta ka xariiqeena in ay dhankooda sii xoojinayaan dadaalka ay kaga qayb qaadanayaan hirgalinta qorshayaasha horumarka nabadgalayda iyo maamulka suuban.